Qarax qasaaro geystay oo ka dhacay magaalada Jowhar - Latest News Updates
Qarax qasaaro geystay oo ka dhacay magaalada Jowhar
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax xoogan oo goordhow ka dhacay Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka Sh.Dhexe.
Qaraxa oo Jugtiisa laga maqlay Xaafado abdan oo kamid ah Jowhar, ayaa waxaa lala eegtay Ciidamo katirsan Milatariga SOmaliya oo xiligaasi ku sugnaa Bar Kontorool oo ku taala Deegaanka Xaanshooleey oo 4 Km Waqooyi kaga beegan Magaalada Jowhar.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Magaalada Jowhar ayaa Mustaqbal usheegay in Qaraxa ay ku geeriyoodeen 3 Qof, Dadka dhintay laba kamid ah waa Askartii la beegsaday, halka qofka kalena uu yahay Shacabka agdhawaa Meesha, Sidoo kale hal ruux ayaa Qaraxa ku dhaawacmay.
Saraakiil katirsan Maamulka Jowhar ayaa meesha ka saaray in Qaraxa kadib ay dhacday rasaas, Dadka deegaanka ayaa soo sheegay in la maqlay rasaas xoogan, Balse Saraakiisha waxa ay arintaa ku micneeyeen iney eheyd mid dadka lagu kala eryayay.
Mjairto wali Cid sheegatay Masuuliyada Qraaxan ka dhacay Magaalada Jowhar oo 90 KM dhanka Waqooyi kaga toosan Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho, Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore sheegtay Qaraxyo iyo weeraro toos ah oo ka dhacay Magaalada Jowhar.